Indlu I-Monochromatic Space iyindlu yomndeni futhi iphrojekthi le yayiqondene nokuguqula indawo yokuhlala kuyo yonke indawo ephansi ukufaka izidingo ezithile zabanikazi bayo abasha. Kumele ibe nobungane kwabadala; babe nedizayini yangaphakathi yesimanjemanje; izindawo zokugcina eziningi ezifihliwe; futhi ukwakheka kufanele kufake ukusetshenziswa kabusha kwefenisha yakudala. I-Summerhaus D'zign ibibanjisene nabacebisi bokuklama ingaphakathi besakha isikhala esisebenzayo sokuphila kwansuku zonke.
Isitolo Sezingubo Zezingane
Isitolo Sezingubo Zezingane Ukuqonda kwezingxenye nakho konke kufaka isandla kuJiyomethri, kubonakale kalula ukugcizelela emikhiqizweni oyithengisayo. Ubunzima bukhushulwe esenzweni sokudala ngensimbi enkulu evimbe isikhala, esivele sinobukhulu obuncane. Inketho yokufaka uthango ophahleni, ukuba nezilinganiso zokubheka ngewindi lesitolo, ugongolo kanye nomhlane wesitolo, bekuyisiqalo sokudonswa kolunye uhlelo; ukusakazwa, ukubukisa, insiza yokuphikisa, okokugqoka nokugcina. Umbala ongathathi hlangothi uphethe isikhala, esifakwe imibala eqinile emaka futhi ihlelele isikhala.
Lokubonisa Ngokunethezeka I-Scotts Tower intuthuko yokuhlala eyindunankulu enhliziyweni yase-Singapore, eyenzelwe ukuhlangabezana nesidingo sabahlali abaxhumeke kakhulu, abasebenza kakhulu ezindaweni zasemadolobheni ngenani elikhulayo labosomabhizinisi abasebenza ekhaya nabasebenza emisha. Ukukhombisa umbono umdwebi wezakhiwo - uBen van Berkel we-UNStudio - abenedolobha 'eliqonde phezulu' elinezindawo ezihlukile ezazivama ukuwela ibhulorho ledolobha, siphakamise ukudala "izikhala ngaphakathi kwesikhala," lapho izikhala zingaguqula khona ebizelwe yizimo ezahlukahlukene.
Ingadi Yasekhaya Ingadi ezungeze villa mlando maphakathi nedolobha. Isakhiwo eside nesincane esinokuphakama okungu-7m. Indawo ihlukaniswe ngamazinga ama-3. Ingadi yangaphansi ephansi ihlanganisa izidingo zomlondolozi kanye nengadi yesimanje. Izinga lesibili: Ingadi yokuzijabulisa enama-gazebos amabili - ophahleni lwechibi elingaphansi komhlaba kanye negalaji. Izinga lesithathu: Ingadi yezingane yaseWoodland. Iphrojekthi le yayihlose ukuphambukisela ukunaka emsindweni wedolobha futhi iguqukele esimweni semvelo. Kungakho ingadi inezici ezithile zamanzi ezithokozisayo njengezitebhisi zamanzi nodonga lwamanzi.
Isitolo Ukusuka ngaphandle nangaphakathi esakhiweni sonke sakhiwo sigcwele izinto zekhonkrithi, kufakwe imibala emnyama, emhlophe nemibala embalwa yokhuni, ndawonye zenza ithoni epholile. Izitebhisi maphakathi nendawo ziba yindawo ehola phambili, izinhlobo ezahlukahlukene ezigoqiwe zifana nesigaxa esisekela isitezi sesibili, bese sijoyina iplatifomu elandisiwe emhlabathini ophansi. Isikhala sifana nengxenye ngokuphelele.
Indawo Yokudlela Nebha
Indawo Yokudlela Nebha Idizayini yokudlela yokudlela idinga ukuheha amakhasimende. Ama-Interiors adinga ukuhlala emutsha futhi ekhangayo ngemikhuba yesikhathi esizayo ekwakhiweni. Ukusetshenziswa okungahambisani nezinto zokwakha kungenye indlela yokugcina amakhasimende ebandakanyeka ekuhlobiseni. I-Kopp yindawo yokudlela eyenzelwe lo mcabango. UKopp ngolimi lwendawo Goan kusho ingilazi yesiphuzo. I-Whirlpool eyakhiwe ngokuvusa isiphuzo engilazi yabonwa njengomqondo ngenkathi kuklanywa le phrojekthi. Ibonisa ifilosofi yoyilo yokuphindaphinda kwamaphethini akhiqiza imodyuli.
Indlu Isitolo Sezingubo Zezingane Lokubonisa Ngokunethezeka Ingadi Yasekhaya Isitolo Indawo Yokudlela Nebha